Marqaan News Agency » DEG DEG+DAAWO VIDEO: Ciidamada Liyuu Boolis oo Xasuuqay Dad Rayid ah+Dad badan oo Dhintay
DEG DEG+DAAWO VIDEO: Ciidamada Liyuu Boolis oo Xasuuqay Dad Rayid ah+Dad badan oo Dhintay
Jan 12, 2017 - 7 Jawaabood
Wararka laga helayo Gobolka Gal-Gaduud Ee Bartahama Dhulka Soomaaliya ayaa ku waramaya in Ciidamada Liyuu Boolis ay dad ku xasuuqeen Degmada Caabud Waaq ee Gobolka Gal-Gaduud.
Dadkaan ayaa Gaaraya ilaa 5 Ruux oo Ay weerar ku soo Qaadeen Ciidamada Maleeshiyaadka Liyuu Booliska Waxaana dhaawacmay tiro intaasi ka badan.
Wararkii ugu dambeeyay Ee Saaka naga soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in Sakay Xaalad ay kacsantahay lagana cabsi qabo in markale dagaal uu ka dhaco halkaasi.
Dhowr Jeer oo hore ayaa waxaa soo laa laabtay Dagaalo qasaare geeystay oo ay soo qaadeen Ciidamada Liyuu Boooliska Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Halkan ku dhufo oo Daawo Video
7 Responses to DEG DEG+DAAWO VIDEO: Ciidamada Liyuu Boolis oo Xasuuqay Dad Rayid ah+Dad badan oo Dhintay
Abdi maratoon Darwiish says:
Doqon Tigree soo diray diintii ka durduriyeee dabka laygu soo
Dhiibay hadaanu igu diliiN isagaa lagu dili eeeeeeeeee.
Waxa uu igudilaay NimaaN daliiliNkariiN laygu dawgalyeee.
DuuL caqliga ka daboolaaN daayiNkay u daraNeee. diricii
Inasiyaad u diriir imadheheeN haduu daalacan lahaaa maato
DooxNimadoodeee. U diriirtoodii daraawiishta aaN u duugay
Damqashadooda MiyaaN deriNta U diidey Nin kuu karaaN doqon
Uu kuuu soo diraay umulodoox dheeeH HadaaN duudka dabka
Lagaga hayn kuwii dad ugu xiggaay madooxeeNeee. dumar iyo
DaNyar meel kumawada diLeeNeee.hayska difaacoo doqmaha
DiiNta ka durduriyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay
Shalay majeerteen maantana mareexaan ha socoto waa ciidan daarood oo maxaa la idin xasuuqayaa aaway daarood nimadii balaaaayo ba ma jirin hortiin👈
kan hilaac ,baa ahay leh nin iyo naag wuxuu yahaymoogi, iyo laga roonrr, madaxa qabiil baa ka maray waa nin jira, alla kuma caafimaadsho. itobiya waxaad aaminsan tahay kama jiraan, iyo daarood baa is dilaya, waxakula dagaalamayaa waa tigrey iyo axmaaro iyo wixii meeshaa dega, hal magac bey wataan, adaaba qabiil ka hadlaya nacasow.
Jeego xiir says:
Marqaan waa iska mirqaansan yihiin mar walba wareer badana waa haystaa oo xaga soomaaliland iyo putiland ah marka dee waa niman isku dhex yaacsan warkan meesha ku qorana xaqiiq ma ahan liyu booliskuna kuma lug lahan mana khuseeyo meesha wax ka dheceena deegaankooda ma ahan. Soomaaliduna iyadaa dhibka isku hayesa ee yaan waxba la xag xaganin umadaha iyo dawladaha deriska ah ee aad maanta meel walba kaga soo qaxdeen iyadoo guud ahaan geeska ay abaari saameeysay oo dadkii soomaliya ka soo qaxay ay waayeen meel kale oo ay istaagaan dawlad deegaanka soomaalida itoobiya mooye.
Maxaad laqracantay waxaas jabartiga
Kufaanayay markii maatada isaaq&hawiye
Tigreegu laynayay tolkaaba ku faraxsanaa oo lahaa waa halyay daarood
Wuu noo arayaa hada miyay idinla xumaatay
Aniga oonan meeshan qabiil ka raacayn waxa aan la yaabahanay marka ay maanta Liyuu Police maleeshiyo noqdeen.
Waa halka Cubeyde shalay marka ay maatida iyo biri ma geydoda beelaha Isaaq iyo Hawiye ee Dawlad Degaanta ama Kililka Shanaad dega ay xasuuqayeen waxa ay u ahaayeen halyeeyo aanan biyo is marin.
Maanta markay isla kuwii Daroodkii usoo dhigteen waxa ay noqdeen Maleeshiyo iyo Tigree.
Marqaan jaha wareerka iyo wax is daba marinta waan ku ogaa, laakiinse maxaa idinku dhacay dadkiinii kale ee buqbuqleynayay.
Maanta ma idiin muuqataa in DDSI ciidankeeda Liyuu Policeka loogu yeedhaa uu yahay Ciidan aanan laheyn qab iyo qorshe amaba xirfadii Ciidanka lagu yaqaanay taas oo ah in uu ciidanku yahay mid dadkiisa ka ilaaliya cadowga dibada uga soo duulaya. In ciidanku uu ilaaliyo sharafta iyo karaamada dadkiisa eenu isagu hoos ugu noqonin oo aanu wax yeeleyn.
Anigu kuma faraxsani arintan oo waa dad Soomaaliyeed oo la laayay. Foolxumo iyo qalbi jab inooga soo kordhaysa mooyaane walee inaanay wax kale inoo soo kordhinayn.
Hadabada dadkiinan wareersani hadaad meeshaad eegi jirteen aanay wax wixii hore ka duwani idiinka soo baxayn, fadlan hareerihiina eega oo arka waaqiciga iyo waaga cusub ee la galay. Waa in maskaxda tuujisaan ood ka shaqeysiisaan si aad fikradihii hore ee gudhiska ahaa uga gudubtaan oo qaar cusub oo ka mucweyn kuwii hore aad la timaadaan.
© 2017 Marqaan News . All rights reserved.
Design by marqaan.